ⓘ ကယ်လ်ဗင် ဟဲရစ်
ကယ်လ်ဗင် Harris ကအဖြစ်ပညာရှင်ပီသစွာလူသိများအာဒံကိုရစ်ချတ် Wiles, စကော့တလန်စံချိန်ထုတ်လုပ်သူ, DJ သမား, အဆိုတော်နှင့်တေးရေးဆရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါဒစ္စကို Created သည်သူ၏ပွဲဦးထွက်စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်ဇွန်လ 2007 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိ, သူ၏ဗြိတိန်ထိပ်တန်း 10 ဦးက "80s အတွက်လက်ခံ" ဆိုရင် single နှင့် "အဆိုပါမိန်းကလေးများ" ဖို့ရှေ့ပြေးခဲ့ပါတယ်။ 2009 ခုနှစ်တွင် Harris ကဗြိတိန်အယ်လ်ဘမ်ပေါ်တွင်အရေအတွက်ကတဦးတည်းမှာပွဲထွက်ခဲ့ပြီးသောနင်္ဂနွေပိတ်ရက်များအတွက်သူ၏ဒုတိယစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်အသင့်ဖြစ်ပြီလား, ဖြန့်ချိမှ CHART နောက်ပိုင်းတွင်၎င်း၏လွှတ်ပေးရေးနှစ်လအတွင်းဗြိတိသျှအသံဒီဇိုင်းစက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့ကရွှေကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ "ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းမရယ်" သူ့ရဲ့ဦးဆောင်တစ်ခုတည်းဗြိတိန်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ဇယားအပေါ်သူ၏ပထမဦးဆုံးနံပါတ်တစ်-တဦးတည်းတစ်ခုတည်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
Harris ကသူ့ရဲ့တတိယစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်များလွှတ်ပေးရန်ဗြိတိန်ဇယား Topping အောက်တိုဘာလ 2012 ခုနှစ် 18 လနှင့်အတူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထင်ပေါ်ကျော်ကြားဖို့ထအယ်လ်ဘမ် မရေတွက် 19 ရောက်ရှိနေပြီရှိရာ ကိုအမေရိကန် Billboard 200 ဇယားအပေါ်ည့်ကျဇယားမှသူ၏ပထမဦးဆုံးဖြစ်လာခဲ့သည်။ အားလုံး "ဘောင်း" သောအယ်လ်ဘမ်ရဲ့ဆိုရင် single ရှစ်, ငါသည်သင်တို့၏မေတ္တာကိုလိုအပ် ", အဆိုပါ Bottle သထံမှသောက်ခြင်း ", အမွှေးအဘယ်အရာကိုမျှ ", ကျနော်တို့သို့ပြန်သွားရန်ကြွလာသောအခါ၌ဖြစ်လိမ့်မယ် ", ရဲ့ Go စို့ ", ဒါပိတ်ခံစားရ "နှင့်" "သင်အကြောင်းစဉ်းစား UK မှာထိပ်ဆုံး 10 ဦးရောက်ရှိခဲ့သည်။ Harris က၎င်းသည်ဗြိတိန်တွင်နံပါတ်တစ်နှစ်ခုမှာ US မှာနံပါတ်တစ်ငါးခုမှာပွဲထွက်ခဲ့ပြီး, နှင့်အမေရိကန်အက / အီလက်ထရောနစ်အယ်လ်ဘန်အပေါ် Harris က၏ဒုတိယဆက်တိုက်နံပါတ်တစ်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်လာခဲ့သည်နိုဝင်ဘာလ 2014 ခုနှစ်၌သူ၏စတုတ္ထမြောက်စတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ် Motion Chart ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ "ထိန်းချုပ်ရေးအောက်မှာ" ဟုအဆိုပါအယ်လ်ဘမ်ရဲ့ပထမဆုံးသုံးဆိုရင် single "နွေရာသီ" နှင့်အားလုံး "အပြစ်တင်" ဗြိတိန်ဇယားပဲရှိတယ်။
Harris ကမြောက်မြားစွာသည်အခြားမှတ်တမ်းတင်အနုပညာရှင်နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Rihanna နဲ့သူ့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု "ကျနော်တို့ကမေတ္တာကိုတွေ့သည်" Harris ကအမေရိကန် Billboard Hot 100 ဇယားအပေါ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအမေရိကန်နံပါတ်တစ်တစ်ခုတည်းပေးခြင်း, နိုင်ငံတကာအောင်မြင်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်။ နှစ်ဦးနောက်ပိုင်းတွင် "သင်ပြီဘယ်မှာ" ဟုအဆိုပါဆိုရင် single 2012 ကိုပူးပေါင်းနှင့် 2016 "ဤသည်ကိုသင်သည်လာဆိုတာဘာလဲ" ။ Harris ကလက်ရှိမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ထက်သာလွန်ကိုးထိပ်ဆုံး 10 posts များနှင့်အတူမှ CHART ဗြိတိန်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အပေါ်တဦးတည်းစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်မှအများဆုံးထိပ်ဆုံး 10 သီချင်းတွေကိုများအတွက်စံချိန်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ အောက်တိုဘာလ 2014 ခုနှစ်တွင်သူသည် Billboard ရဲ့အက / အီလက်ထရောနစ်သီချင်းများဇယား၏ထိပ်ဆုံး 10 ရက်နေ့တွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းသုံးသီချင်းတွေကိုနေရာကိုပထမဦးဆုံးအနုပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူလည်း Spotify အပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုဘီလီယံအထိစီးရောက်ရန်ပထမဦးဆုံးဗြိတိန်တစ်ကိုယ်တော်အနုပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Harris ကအကောင်းဆုံးဗြိတိန်အမျိုးသားအဘို့အတစ်ဆယ် Brit Award ဆုလျာထားခံရ-သုံးခုကိုလက်ခံရရှိနှင့်လေးဂရမ်မီအမည်စာရင်း, သူသည် 2013 ခုနှစ်တစ်နှစ်တာ၏တေးရေးဆရာများအတွက်ဗြိတိန်အကယ်ဒမီရဲ့ Ivor Novello Award ဆုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့် 2015 Billboard Music ကိုမှာ 2013 ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဂီတဗီဒီယိုတစ်ခုဂရမ်မီအနိုင်ရထားပါတယ် ဆုပေးပွဲထိပ်တန်း Dance / အီလက်ထရောနစ်အဆိုတော်အမည်ရှိ၏။ ထို့အပြင် Harris က 2013 ခုနှစ်ကနေခေတ်ပြိုင်ဗြိတိန်လူကြိုက်များယဉ်ကျေးမှု၌အအောင်မြင်ဆုံးဂီတပညာရှင်၏ 2015 ခုနှစ်တစ်ခုမှာသုံးနှစ်ဆက်တိုက်ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး-paid DJs ၏ Forbes မဂ္ဂဇင်း စာရင်းထဲမှာထိပ်ဆုံး, Harris ကဗြိတိန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဩဇာအရှိဆုံးလူများ၏ Debrett ရဲ့ 2017 စာရင်းတွင်ထင်ရှား။, Harris ကသူ့ကိုယ်ပိုင်စံချိန်တံဆိပ်, Fly မျက်လုံး Records ကိုပြေး။
Harris က 18 တုန်းကသူကပထမဦးဆုံးသူနှစ်ဦးကိုသီခငျြးမြား "Da Bongos" နှင့် "တောက်ပသည့်နေ့ရက်များ" ဖြန့်ချိ 1999 ၌သူ၏ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အီလက်ထရောနစ်ဂီတကိုဆွဲဆောင်နှင့်အိပ်ခန်းပို့လိုက်ကြတယ်မှတ်တမ်းတင်စတင်ခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. "Stouffer" အောက်မှာအစောပိုင်း 2002 ခုနှစ်မှာတံဆိပ်သိသာထင်ရှားနေဖြင့် 12 လက်မအရွယ်ကလပ်ဆိုရင် single နဲ့ CD-EPS အဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။ မိမိအအကြွေးဤဆိုရင် single နှင့်အတူ, Harris ကဒေသခံဂီတမြင်ကွင်းကနေသင်ယူဖို့မျှော်လင့်, လန်ဒန်မှစကော့တလန်ကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ မိမိအသီချင်းများထဲကတစ်ခုလန်ဒန်မှာသူ့အချိန်ကာလအတွင်းဖြန့်ချိခဲ့သည်သာလျှင်, အ Unabombers 2004 CD ကိုလျှပ်စစ် Soul, Vol တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-ရောထွေးအပေါ်အဆိုတော် Ayah Marar နှင့်အတူ "ငါ့ကိုသိပါစေ" ။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပိုက်ဆံမရှိခြင်းနှင့်အတူ2Harris က Dumfries မှအိမ်ပြန်နှင့်သူ၏ Myspace စာမျက်နှာအိမ်လုပ်တစ်ကိုယ်တော်အသံသွင်းပို့စ်တင်စတင်ခဲ့သည်။ လူမှုမီဒီယာ website တွင် Harris က လူကြိုက်များမာကု Gillespie, မကြာသေးမီက Harris ကကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးစေရန်, သူ့ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီတခုကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သူကခုန်-ပွဲတော်ကုမ္ပဏီတခုကို Global စုရုံးခြင်းအဘို့အခွက်တဆယ် booker သတိပေးခံရအင်တာနက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
2.1. ဂီတအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 2006-2008: အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်
သူလည်း social networking ဝဘ်ဆိုဒ် Myspace အပေါ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် Harris က 2006 ခုနှစ်, သုံးခြောက်သုညအဖွဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု နဲ့ EMI ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး နှင့် Sony BMG အသံဖမ်း စာချုပ်များလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း 2006 ခုနှစ်တွင် Harris ကအားလုံးသူတော်စင် တစ်ခုတည်း "ရော့ခ်ပုံမှ" ၏တစ်ဦး remix ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Harris ကရဲ့ပွဲဦးထွက်အယ်လ်ဘမ်ကိုငါဒစ္စကို Created, သူပြန် Dumfries, စကော့တလန်သူ့ရဲ့ဇာတိမြို့မှလန်ဒန်တှငျနထေိုငျကနေပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက် 2006 ခုနှစ်တွင်အယ်လ်ဘမ်အလုပ်လုပ်စတင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ 2007 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အားလုံး 14 ပုဒ်, စာဖြင့်ရေးသားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေတစ်ခုတည်းကိုသာ Harris ကအပေါင်းတို့နှင့်တကွမှတ်တမ်းတင်အားဖြင့်၎င်း, အယ်လ်ဘမ်များအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြသည်တစ်ခု Amiga ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အရပ်ဌာနကိုယူ။ ငါဒစ္စကို Created မြှင့်တင်ရန်, Harris ကဖောက်ပြန်နှင့် Groove Armada supporting, ဗြိတိန်၏ခရီးစဉ်စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ငါဒစ္စကိုဗြိတိသျှအသံဒီဇိုင်းစက်မှုဝန်ကြီးဌာန BPI ကကိုရွှေအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရ Created ။ ဒါဟာအမေရိကန်ထိပ်တန်းအီလက်ထရောနစ်အယ်လ်ဘန်အပေါ်ဗြိတိန်အယ်လ်ဘန်ဇယားနဲ့နံပါတ် 19 ရက်နေ့ကအရေအတွက်ကရှစ်ရောက်ရှိ.
မိမိအအသံသွင်းအခြားစံချိန်ထုတ်လုပ်သူများကသူ့ထံသို့အပေါ်လွန်ခဲ့ပြီးမှထိုနှစ်တွင်ပင်, Harris ကဩစတြေးလျပေါ့ပ်အဆိုတော် Kylie Minogue များ၏အာရုံကိုဖမ်းမိ။ ဒါကသူ့ကို Co-အရေးအသားမှဦးဆောင်နှင့်သူမ၏ 2007 ခုနှစ်အယ်လ်ဘမ် X- "စိတျနှလုံးရော့ခ် Beat" နှင့် "ကျနော့်လက်နက်များတွင်" ယူကေမှာတစ်ခုတည်းထိပ်တန်း-10 အဆုံးစွန်နှစ်ခုသီချင်းတွေကိုထုတ်လုပ်။ Harris ကသူက "သူမ၏တွေ့ဆုံမတိုင်မီအနည်းငယ်အချိုရည်လိုအပ်နေ" ကို 2007 ခုနှစ် Mixmag ဝန်ခံပေမယ့် Minogue အတူလုပ်ကိုင် "လွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်ပေမယ့်ပျော်စရာ" ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ Harris ကလည်းRóisín Murphy ရဲ့အယ်လ်ဘမ် Overpowered မှသီချင်း "ဟာ Off & တွင်" လှူဒါန်းခဲ့ပေမယ့်အယ်လ်ဘမ်ထဲကနေဖြတ်ခဲ့သည်။ Harris ကနောက်ပိုင်းရှုခင်း Make သူမ၏ 2011 ခုနှစ်အယ်လ်ဘမ်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ရန်ဆိုဖီအဲလစ်-Bextor မှသီချင်းကိုပေးပါလိမ့်မယ်။ 2007 ခုနှစ်တွင် Harris က Kelis အယ်လ်ဘမ်အသား Tone ကနေဒုတိယတစ်ခုတည်း "ဇူလိုင်လ၏ 4th မီးပန်း" တစ်ဦး remix ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။.
2008 ခုနှစ်တွင် Harris ကအတွေးကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ချိတ်သီဆို, သူ့တစ်ခုတည်း "Dance wiv ငါ့ကို on" ရက်ပ် Dizzee Rascal နှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ဗြိတိန်အတွက်တစ်ခုတည်းရောက်ရှိနံပါတ်တစ်နှင့် 600.000 မိတ္တူရောင်းချနေခြင်း, BPI တို့ကပလက်တီနမ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 2008 Popjustice £ 20 Music ကိုဆုများအတွက်ဆန်ကာတင်စာရင်းနှင့် 2009 ခုနှစ်တွင်ဗြိတိသျှလူပျိုများနှင့်အကောင်းဆုံးခေတ်ပြိုင်သီချင်းတစ်ခု Ivor Novello Award ဆုအမည်စာရင်းတင်သွင်းများအတွက် Brit Award ကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာ 18 2008 တွင်, Harris ကတစ်ဦးနှစ်ဦး-နာရီအစုံနှင့်အတူဘီဘီစီရေဒီယို 1 ရဲ့မရှိမဖြစ်ရောသမအပေါ် featured ခဲ့သည်။.
2.2. ဂီတအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 2008-2010: ဒုတိယအစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်
Harris က ဒုတိယအယ်လ်ဘမ်သည် Weekend အတှကျအဆငျသငျ့, နောက်ဆုံးမှာလွတ်မြောက်လာ၏နှစ်လအတွင်း BPI တို့ကရွှေကိုအသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း, ဩဂုတ်လ 2009 ခုနှစ်ကဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ဗြိတိန်အယ်လ်ဘန်ဇယားအပေါ်အရေအတွက်ကတဦးတည်းမှာပွဲထွက်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ အယ်လ်ဘမ်တွင်ထည့်သွင်းသည့်တိုင်အောင်တဆယ်လေးပုဒ်၏က Eleven တစ်ခုတည်းကိုသာ Harris ကအသုံးပြုပုံသီဆိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့ကြသည်။ "ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းမရယ်" အယ်လ်ဘမ်ရဲ့ဦးဆောင်တစ်ခုတည်း 2009 ခုနှစ်ဧပြီလ၌ရှိသကဲ့သို့ဖြန့်ချိ, ဗြိတိန်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ဇယားအပေါ်အရေအတွက်ကတဦးတည်းမှာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုတည်းပါ "ဟုတနင်္ဂနွေအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား", နံပါတ်သုံးရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဂျော်ဒန်အဆိုတော် Ayah Marar featuring တနင်္ဂနွေအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားကနေတတိယတစ်ခုတည်း, "Flashback" ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်အရေအတွက်ကဆယ်ရှစ်ယောက်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ အယ်လ်ဘမ်၏ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း Harris က YouTube ကိုခေါင်းစဉ်က JAM တီဗီပေါ်တွင်ဗီဒီယိုများတစ်စီးရီးတည်ခင်းဧည်, သောထိုကဲ့သို့သော Florence Welch, Goldie, Katy Perry အဖြစ်ဂီတသမားယို၏အိုးဖွင့်လှစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ 2010 Brit Awards ဆုပေးပွဲမှာ Harris ကအကောင်းဆုံးဗြိတိန်အမျိုးသားတစ်ဦးအမည်စာရင်းတင်သွင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
8 ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 တွင်အယ်လ်ဘမ်မှစတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးတစ်ခုတည်းအဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ် "သင်ငါ့ကိုကိုင်ထားရန်အသုံးပြု" ။ ဒါဟာဗြိတိန်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ဇယားအပေါ်အရေအတွက်က 27 အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ သီချင်း Harris ကမှန်မှန်သည်သူ၏မှတ်တမ်းများအပေါ်သီဆိုခဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှတ်သားသူဧည့်သည်အဆိုတော်များသူ့အဘို့မအသံများကိုရှိခြင်းစဉ်ဂီတထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ရန်ရွေးချယ်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်, မကြာမီပတ်ရစ်သူ၏ "အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားအဆိုပါနင်္ဂနွေပိတ်ရက်များအတွက်ခရီးစဉ်" ပြီးနောက်, Harris ကသူဦးဆောင်အဆိုတော်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်တိုက်ရိုက်ရှိုးလုပ်နေတာရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့၌သူ၏တီးဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူနည်းလမ်းတွေနှံ့ပြား။ Billboard နှင့်အင်တာဗျူးတွင်ခုနှစ်, Harris က said: "ငါ ငါစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်အတိအကျအဘယ်အရာကိုမသိရပါဘူး။ 2013 ခုနှစ်တွင် "ကျနော်တို့ကမေတ္တာကိုတွေ့သည်" လူအပေါင်းတို့သည်အချိန် Billboard s ထိပ်ဆုံး 10 ကခုန်-Pop ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်နံပါတ်သုံးမှာနေရာချပေးခဲ့သည်။
R & B အဆိုတော်မာရိသည်ဂျေ Blige ရဲ့အယ်လ်ဘမ်များအတွက် Harris က Co-ရေးသားခဲ့သည်များနှင့်ပူးတွဲထုတ်လုပ်ဆုကြေးငွေလမ်းကြောင်း "တဈခုမှာဘဝက" ကျနော့်ဘဝက II ကို. အဆိုပါခရီး 2011 Continues ။ သူလည်းသူတို့ရဲ့စတုတ္ထစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်ကို Magic နာရီကနေတစ်ခုတည်း "သာလျှင်မြင်း" ပေါ်ပေါ့ပ်ဂီတအဖွဲ့ဟောပြောခြင်းမှာသင်ညီအစ်မနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ Cheryl Cole ကိုရဲ့တစ်ခုတည်းသော, "ကျနော့်အမည် Call" သူမ၏တတိယအယ်လ်ဘမ်တစ်ဦးသန်းအလင်းများကနေတစ်ခုတည်းကိုဦးဆောငျရေးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Harris ကလည်း "Spectrum ငါ့နာမပြောပါ" ခေါင်းစဉ်ကို Florence နှင့်စက်ရဲ့ "Spectrum" ၏တစ်ဦး remix ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းဇူလိုင်လ 2012 ခုနှစ်5ရက်နေ့တွင်အယ်လ်ဘမ်ရဲ့ပဉ္စမတစ်ခုတည်းအဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့တာဒါဟာဒါဟာဗြိတိန်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ဇယားအပေါ်အရေအတွက်ကတဦးတည်းမှာအထွတ်အထိပ်မှအုပ်စုရဲ့ပထမဦးဆုံးတစ်ခုတည်းဖြစ်လာခဲ့သည်ဇူလိုင်လ 20122ရက်နေ့တွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ရေဒီယိုမှဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည်။
2012 ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းဖြန့်ချိ Ne-Yo, featuring "ရဲ့ Go ကြစို့" ကိုလည်းဗြိတိန်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ဇယားများတွင်နံပါတ်တစ်ခုနှဈခုရောက်ရှိခဲ့သည်။ အရေအတွက်က 17 မှာသီချင်း charting အဓိကအနုပညာရှင်, ဖေဖော်ဝါရီ 2013 ခုနှစ်တွင် "ကျနော်တို့လာမယ့်ခံရပါလိမ့်မယ်အဲဒီအယ်လ်ဘမ်ရဲ့စတုတ္ထတစ်ခုတည်းကျင်းပခဲ့သော 55 ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာအကောင်းဆုံးအကမှတ်တမ်းတင်များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းလက်ခံရရှိကြောင့်သူ၏ဒုတိယအမေရိကန် Billboard Hot 100 အသွင်အပြင်ခဲ့သည် နောက်သို့ "ရက်ပ်ဥပမာ Featuring ဇူလိုင်လ 2012 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်က UK မှာအရေအတွက်အားနှစ်ခုမှာအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သွားသည်။ "အမွှေးအဘယ်အရာကိုမျှ" တစ်ခုတည်းပဉ္စမ Florence ၏ Welch နှင့်စက်တပ်ဆင်ထားခြင်း, 14 အောက်တိုဘာလဒါဟာတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်မှ CHART ဗြိတိန်အပေါ်အရေအတွက်ကတဦးတည်းမှာအမေရိကန် Billboard Hot 100 အပေါ်အရေအတွက်က 10 ခုရရှိခဲ့အဆိုပါသီချင်းမှာအထွတ်အထိပ်သို့ 2012 ခုနှစ်ရက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် အဆိုပါ 56 ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာအကောင်းဆုံးအကမှတ်တမ်းတင်များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်း။ ဤရွေ့ကားဆိုရင် single, Harris ကနောက်ဆုံးမှာယခင်ကနေဖြင့်သတ်မှတ်စံချိန်ကိုချိုးဖောက်, တဦးတည်းစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်မှရှစ်ထိပ်တန်း-10 ဆိုရင် single မှီဖို့ပထမဦးဆုံးအနုပညာရှင်ဖြစ်လာနေဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံဇယားသမိုင်းကိုဖန်ဆင်းအောက်တိုဘာလ 2012 ခုနှစ် 29 ရက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည့် 18 လ, သူ့ရဲ့တတိယစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည် မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်။ 18 လအတွက် 56 ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာအကောင်းဆုံး Dance / Electronica အယ်လ်ဘမ်များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Harris ကလည်းဖေဖေါ်ဝါရီလအတွင်း 2013 ခုနှစ် Brit Awards မှာအကောင်းဆုံးဗြိတိန်အမျိုးသားတစ်ကိုယ်တော်အဆိုတော်များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။.
သူက "ကျနော်တို့ကမေတ္တာကိုတွေ့သည်" အဘို့နှင့် Rihanna အတူတစ်နှစ်တာ၏ဗီဒီယိုကို "ဒါပိတ်ခံစားရ" အကောင်းဆုံးအီလက်ထရောနစ်ဗီဒီယိုအနိုင်ရဘယ်မှာ Harris က, Staples Center မှာကျင်းပတဲ့ 2012 ခုနှစ် MTV Video Music Awards ဆုပေးပွဲမှာအိမျတျောကို DJ သမား, Los Angeles မြို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ Harris ကမေလအတွက် Grosvenor House ရဲ့ဟိုတယ်, လန်ဒန်မှာကျင်းပတဲ့ 2013 ခုနှစ် Ivor Novello ဆုပေးပွဲမှာဧပြီလ 2013 ခုနှစ် 2013 ခုနှစ်ဖော်မြူလာတစ်ခုမှာဘာရိန်း Grand Prix ၏ Post-ပြိုင်ပွဲဖျော်ဖြေပွဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖျော်ဖြေ, Harris က၏တေးရေးဆရာများအတွက်ဗြိတိန်အကယ်ဒမီရဲ့ Ivor Novello Award ဆုကိုရရှိခဲ့ Harris က "ငါ့တဈခုလုံးကိုအသက်တာ၏ကိုအလွယ်တကူအကြီးမြတ်ဆုံးအောင်မြင်မှုက" တောင်းဆိုအတူတစ်နှစ်တာ။ 2012 ခုနှစ်တွင် Harris ကသူသည်ဖျောပုဒ်ပေါ်မှာသီဆိုရပ်တန့်ဖို့လိုခငျြအဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်း "ငါကဖြစ်နိုင်ခြေများသောအားဖြင့်ပေါ်မှာသီဆိုမဟုတ်ငါ့ကိုဆိုလိုတာက, ဖြစ်နိုင်ပါသည်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီလမ်းကြောင်းအဖြစ်ကောင်းသောချင်တယ်။ ။
2.3. ဂီတအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 2013-2015: စတုတ္ထစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်နှင့်ကလပ်-စတိုင်စည်းချက်
အောက်တိုဘာလ 20137ရက်နေ့မှာ Harris ကများနှင့်ဆွီဒင်ဒီဂျေ Alesso သည်သူ၏စတုတ္ထမြောက်အယ်လ်ဘမ်မှပထမဦးဆုံးတစ်ခုတည်းအဖြစ် "လက်အောက်တွင်ထိန်းချုပ်ရေး" ဟုခေါ်နှိပ်စက်တာစင်းပေါ့ပ်နှစ်လုံးနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တစ်ခုတည်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သီချင်း UK မှာနံပတ်တစ်မှာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ နောက်ပိုင်းအဲဒီလ, Harris ကအယ်လ်ဘမ်တိုက်ရိုက် Hits သူတို့ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံး hits ၏ Deluxe ထုတ်ဝေဘို့ "သင်လူငယ်တို့ကြတဲ့အခါမှာ" The Killers သီချင်းရောနှော။ သူက Rolling Stone ကနေတဆင့်အပြည့်အဝခြောက်မိနစ်ဗားရှင်းကိုပွဲထုတ်မိတ်ဆက်နှင့်မဂ္ဂဇင်းသို့ပြောကြားခဲ့သည်: "ဒါဟာငါ့အကြိုက်ဆုံးခေတ်သစ်ခညျြအနှောများထဲမှ remix ဖို့တောင်းခံရဖို့အမှန်တကယ်ဂုဏ်အသရေဖြစ်ခဲ့သည်, ငါ့ကခုန်အဘို့ဤဂန္လမ်းကြောင်း update လုပ်ဖို့အဘို့အကတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့သည် အရသာနှင့်လေးစားမှုလမ်းအတွက် -floor "။.
မိမိအစတုတ္ထအယ်လ်ဘမ် Motion, က "ထိန်းချုပ်ရေးအောက်မှာ" ဟုယခင်ကဖြန့်ချိဆိုရင် single "နွေရာသီ", "အပြစ်တင်" နှင့် "ပြင်ပ" တို့ပါဝင်သည်နိုဝင်ဘာလ 2014.4ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ရော့ခ်တီးဝိုင်းသုံး Haim featuring အယ်လ်ဘမ်ထဲကနေနောက်ထပ်လမ်းကြောင်း "ကိုဘုရားသခင်အားဆုတောင်းပါ", 2015 Brit Awards ဆုပေးပွဲမှာ 11 ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 ရက်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်, "နွေရာသီ" အကောင်းဆုံးဗြိတိန်လူပျိုနှင့်တစ်နှစ်တာဗြိတိန်အဆိုတော်ဗီဒီယိုများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဇွန်လ2ရက်နေ့တွင်လန်ဒန်မြို့၌ 2015 စွဲမက်ဖွယ်ရာဆုပေးပွဲမှာ Harris ကတစ်နှစ်တာ၏စွဲမက်ဖွယ်ရာဗြိတိန်ရဲ့က Man အမည်ရှိ၏။ ထို့အပြင်သူသည် Billboard s ထိပ်တန်း 30, EDM ပါဝါကစားသမားအပေါ်6အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အလားတူလ Harris က Las Vegas မှာကျင်းပတဲ့လျှပ်စစ် Daisy ပွဲတော်ကြီးမှာအဓိကဇာတ်စင်လိုင်း-Up ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။.
2.4. ဂီတအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 2016–present: Fifth studio album
Harris က "ဤကိုသင်သည်လာဆိုတာဘာလဲ" Rihanna တပ်ဆင်ထားသည့် 29 ရက်နေ့ဧပြီ 2016 အဆိုပါတစ်ခုတည်းဗြိတိန်တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ဇယားအပေါ်အရေအတွက်ကနှစ်ခုမှာပွဲထွက်ခဲ့ပြီးခေါင်းစဉ်သစ်တစ်ခုတစ်ခုတည်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ Harris က ဒုတိယထိပ်ဆုံးငါးသီချင်းဖြစ်လာအမေရိကန် Billboard Hot 100 မှာနံပါတ်သုံးမှာအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သွားသည်။ ဒါဟာအစကိုအမေရိကန် Hot Dance / အီလက်ထရောနစ်သီချင်းများအပေါ်နံပါတ်တစ်, အစ်မဇယားအက / အရောအနှောကိုပြသပါ Airplay နှင့်, Hot Dance Club ကသီချင်းများဇယားအပေါ်သူ၏စတုတ္ထဇယား-topper အပေါ် Harris ကယ့်ဒသမအရေအတွက်ကတဦးတည်းဖြစ်လာသည်အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာဩစတြေးလျ, ကနေဒါနှင့်အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ဇယားထိပ်ဆုံးနှင့်ဂျာမနီ, အိုင်ယာလန်, နယူးဇီလန်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်အတွက်ဇယား၏ထိပ်ဆုံးတစ်ဆယ်အတွင်းအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သွားသည်။
2008 ခုနှစ်တွင် Harris က ပွဲဦးထွက်အယ်လ်ဘမ်၏မျက်နှာဖုံးငါဒစ္စကို TV ပေါ်မှာနှင့်အမေရိကန်အတွက်ပုံနှိပ်အတွက်ရောင်စုံ, iPod nano ကမ်ပိန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် featured ခဲ့သည် Created ။ 2009 ခုနှစ်တွင် Harris ကဗြိတိန်မှာသူတို့ရဲ့ ပွင့်လင်းပျော်ရွှင်မှု ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများအတွက် Coca-Cola ကအတူတက်ပူးပေါင်း။ Harris က အင်းအင်းအင်း, La TV ပေါ်မှာ featured ခဲ့သော, ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြင်ပနှင့် On-ထုပ်ပိုးမြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့်အခမဲ့ download ဘို့ ကိုကာကိုလာဇုန် က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ခေါ်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသီးသန့်လမ်းကြောင်းရေးသားခဲ့သည်များနှင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်, Harris ကရဲ့သီချင်း "အရောင်များ" ဟုအဆိုပါ Kia Soul EV များအတွက် Kia Motors ကရဲ့ဟမ်းစတားရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာအတွက် featured ခဲ့သည်။
2012 ခုနှစ်တွင် Harris ကသူတို့ရဲ့ဘောလုံးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများအတွက် Pepsi Max စီးပွားဖြစ်အတွက် featured ခဲ့သည်။ "လူအစုအဝေး surfing" အမည်ရယင်းကြော်ငြာကြယ်ဘောလုံးသမား Lionel Messi, Didier ဒရော့ဘာ, ဖာနန်ဒိုတောရက်စ်, ဖရန့်လမ်းပတ်, ဆာဂျီယိုဒါ့အပြင်နဲ့ Jack Wilshere နဲ့တွဲပြီး partygoers ၏လူအစုအဝေးရန် "ရဲ့ Go ကြစို့" သူ၏တစ်ခုတည်းသောကစား DJ သမားကုန်းပတ်ပေါ် Harris ကပြသခဲ့သည်။ 2013 ခုနှစ်တွင် Harris ကသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစတူဒီယိုညှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်-caliber နားကြပ်ကိုဖန်တီးရန် Sol သမ္မတနိုင်ငံအတူတက်ပူးပေါင်း။ အဆိုပါပူးပေါင်းသည့်နားကြပ်တစ်ခုစိတ်ကြိုက်ကြည့်ဒီဇိုင်းနှင့် Harris က သတ်မှတ်ချက်များရန်၎င်း၏ယာဉ်မောင်းဒီဇိုင်းပြန်လည်းရေးဆွဲပါဝင်ပတ်သက်။.
Encore သဲသောင်ပြင်ကလပ်, လက်နက်ချနှင့် XS နိုက်ကလပ်: 2012 အစောပိုင်း၌, Harris ကဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်းရဲ့နည်းလမ်းသုံးခုမှာအရင်ဖျော်ဖြေပါဝင်သည်ရာ Wynn Las Vegas မှာအတူတစ်ဦးသီးသန့် DJ သမားနေထိုင်ခွင့်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ 2013 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ Harris ကအဘူဒါဘီပိုင်ဧညျ့ကုမ္ပဏီ Las Vegas မှာ Hakkasan Group နဲ့ပထမဦးဆုံးသီးသန့်နေထိုင်သူ DJ သမားအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါ 20 လကြာနေထိုင်သူ့ကို MGM Grand ရဲ့စိုစွတ်သမ္မတနိုင်ငံမှာ MGM Grand ရဲ့ Hakkasan နိုက်ကလပ်မှာ 46 ရက်စွဲများအဖြစ် 22 အပိုဆောင်းအရင်ဖျော်ဖြေကစားမြင်တော်မူ၏။ ဇန်နဝါရီလ 2015 ခုနှစ်မှာသူဟာအုပ်စု၏ Las Vegas နေရာများ Hakkasan နိုက်ကလပ်, စိုစွတ်သမ္မတနိုင်ငံကဲသာဘုရင်နန်းတော်မှာ Omnia နိုက်ကလပ် ၏သုံးခုမှာ Resident ပါဝင်သောသုံးပိုပြီးနှစ်ပေါင်းများအတွက် Hakkasan အုပ်စုတစ်စုနဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဖက်တိုးချဲ့။ Harris ကလည်းတစ်ကမ္ဘာလုံး၎င်း၏စားသောက်ဆိုင်, နိုက်ကလပ်နှင့်ဟိုတယ်များများအတွက် Group ၏ဂီတအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
မတ်လ 2015 30 ရက်တွင်, Harris ကဂီတကို streaming service ကိုဒီရေအတွက်, အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားဂီတအနုပညာရှင်များနှင့်အတူတစ် Co-ပိုင်ရှင်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို Lossless အသံနှင့်မြင့်မားနှင့်အဓိပ္ပါယ်သီချင်းဗီဒီယိုများအတွက်အထူးပြုသည်။ rapper Jay-Z Beyonce နဲ့ Jay-Z, 16 အနုပညာရှင်သက်ဆိုင်သူများ Co-ကိုယ်ပိုင်အပါအဝင် 2015 ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွက်, ဒီရေ, Aspiro ၏မိခင်ကုမ္ပဏီဝယ်ယူ အများစုဟာ 3% အစုရှယ်ယာရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်နှင့်အတူဒီရေ။ တစ်ခုလုံးကိုအနုပညာရှင်ပိုင်ဆိုင်သော streaming ဝန်ဆောင်မှုရှိခြင်း၏စိတ်ကူးကလက်ရှိဂီတစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်း streaming များအတွက်တိုးမြှင့်ဝယ်လိုအားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson သူတို့ရဲ့အနိမ့်ပေးချေမှုများအတွက်ဝေဖန်ခဲ့ကြရသော Spotify ကဲ့သို့သောအခြားအ streaming များဝန်ဆောင်မှုများကိုအပြိုင်ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာလ 2007 ခုနှစ်တွင် Harris ကကန်ဒန်းမြို့, လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ KOKO နိုက်ကလပ်မှာရှင်သန်နေသော Miserables ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများ၏အကူအညီထဲမှာ "လူငယ်လည်းယိုယွင်း" ဟုမေတ္တာဖြစ်ရပ်အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ် UK ရှိလူတို့တွင်လူငယ်သတ်သေ၏ကိစ္စကိုအာရုံစိုက်မိဖို့နဲ့မေတ္တာများအတွက်အသိအမြင်နှင့်ငွေပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ရည်ရွယ်။ 2008 ခုနှစ်တွင်သူ Shelter ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစကော့တလန်အတွက်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များနှင့်မကောင်းတဲ့အိုးအိမ်အဆုံးသတ် pledges ထားတဲ့ "Hometime စကော့တလန်" ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ 2010 ခုနှစ်တွင် Harris ကအဆိုပါသိုးထိန်းရဲ့ဘုရ်ှအင်ပါယာ, လန်ဒန်မှာအရပျကိုလုယူသော La Roux နှင့် Kasabian အတူ ကစစ်ပွဲကလေး၏ Post-Brit Awards ဆုပေးပွဲပြပွဲများတွင်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်စစ်ဇုန်များတွင်အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့်ထိခိုက်ကလေးများအပေါ်ရန်ပုံငွေများနှင့်အများပြည်သူအသိပညာထမြောက်တော်မူ။.
ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 ခုနှစ်, Harris ကပြပွဲကနေအားလုံးရရှိသောအဆိုပါကလေးဆေးရုံ Los Angeles မြို့မှာကလေးများအရိုးအထူးကုစင်တာတွင်သွားနှင့်အတူတစ်ဦးမေတ္တာဖျော်ဖြေပွဲမှာဖျော်ဖြေဖို့ Rihanna နှင့် Coldplay အပါအဝင် အခြားအနုပညာရှင်တွေအတူတက်ပူးပေါင်း။ နိုဝင်ဘာလ 2012 ခုနှစ်, Harris က AIDS ရောဂါအခမဲ့မျိုးဆက်များအတွက်တိုက်ပွဲအပေါ်သိရှိလာစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့သည့် Anti-AIDS ဝေဒနာရှင်များအတွက်ကုန်ပစ္စည်းနီနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. Tiestoရဲ့စုစည်းအယ်လ်ဘမ် Dance အနီရောင် Save ကိုဘဝပုံစံမှအတော်ကြာသီချင်းတွေကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။ Harris ကအယ်လ်ဘမ်နှင့်ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးအနေဖြင့်အဆိုပါရရှိသောအကြောင်းရင်းအဘို့လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်ဒီဇင်ဘာလ 2012 ခုနှစ် 1 ရက်နေ့တွင်ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့တွင်ရာအရပျလုယူသောမဲလ်ဘုန်းမြို့ဩစတြေးလျအတွက် Stereosonic ဂီတပွဲတော်တစ်ခုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်စီးပါဝင်ခဲ့။.
Wikipedia: ကယ်လ်ဗင် ဟဲရစ်